सविता पौडेल नर्स र नर्सिङ भन्नासाथ हामीले फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेललाई सम्झनै पर्छ। जसले आज नर्सलाई संसारभरि नै चिनाएकी छिन्। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्म इटालीको फ्लोरेन्स भन्ने ठाउँमा एउटा पढेलेखेको परिवारमा सन् १८२० मे १२ का दिन भएको थियो। सानैदेखि उनलाई राम्रो शिक्षा दिइएकोे थियो। जुन सामान्य भिक्टोरिया परिवारका छोरीहरुले पाउँदैन थिए। उनी २४ वर्षको हुँदा उनलाई अस्पतालमा काम गर्ने इच्छा थियो, तर ...
स्थानीय निर्वाचनः सही नेतृत्वको आवश्यकता
अजय जीएम सरकारले झण्डै दुई दशक पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरे लगत्तै देशभर चुनावी माहोल बनिसकेको छ । हरेक सामुहिक बसाईमा अहिले प्रायः राजनीतिक विषयको बारेमा बढी चर्चा भइरहेको पाइन्छ । युवा पुस्ताको सक्रियतासङ्गै मोजमस्तीमा रमाउने ’टिनएज’बीच पनि अहिलेको चुनावबारे गम्भीर छलफल हुन थालेको छ । छलफलबीच मुख्यतः केही बिषयहरुमा बढी विवाद पनि देखिन्छ । पुरानै दल कांग्रेस, ...
चुनावले लड्ने,मर्ने मार्ने स्थानको टुंगो लाग्छ
गोविन्द खड्का चुनाव खारेज हुनुपर्छ भन्ने एउटा नेतृत्व मरो घरमा छ । फरक फरक पार्टिलाई म त दिने देखि चुनाव लड्ने शक्ति पनि घर भित्रै छ । उनीहरु सबैलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता हाम्रो घरमा छ । कसैको पक्षमा हुन वा नहुनु संग मैले सरोकार छैन । स्थानिय चुनाव हुनुर्ने म त राख्दैछु । यति भनिरह“दा जनयुद्धको सिपाहि बनेको पटक्कै भुलेको छैन ...
बलिदान शर्मा सत्तारुढ दल नेकपा ( माओवादी केन्द्र ) र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग देखिएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि राजनीतिक वृत्तमा अनेकौं बहस र आशङ्काहरु जन्मिएका छन् । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले महाअभियोगलाई स्वाभाविक र संसदको आफ्नो प्रक्रियाका रुपमा लिएका छन् भने प्रमूख प्रतिपक्षी दल लगायतका केही राजनीतिक ...
पाक्षिक नगर सरसफाई अभियान निस्कौं
गोविन्द खड्का बाईक चढे । गोजीवाट सुद्धप्लस निकाले । तरक्क च्याते । टुक्रो भुईमा खसाले । दुई हातले च्याप्प समाति चलाएर फा“को हाले । त्यसलाई पनि उडाईदिए । त्यस पछि मोटरसाईकल स्टार्टको पोजीशनमा गए । नजिक बाट हेरीरहेको मैले सहन सकिन । नजिकै पुगेर सम्मानका साथ सोधे ‘किन फाल्नुभयो ?’ मेरा परिचीत मित्र कुनै राजनीतक दलका जिल्ला स्तरका एक नेताहुन् ...
गंगा दाहाल राजनीतिमा महिलाको भुमिकाको चर्चा सधै भइरहन्छ। राजनीतिमा महिलाको भुमिका कहिले पर्दा पछाडी हुन्छ त कहिले अगाडी । कहिले महिलाले राज्यसत्ताको उपयोग गर्छन त कहिले राजनीतिले महिलालाई बस्तुको रुपमा प्रयोग गरेर राजनीतिलाई प्रभावित गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्ताको प्रयोग गर्ने महिला अत्यन्तै न्यून छन्। राज्यसत्ता र राज्यसत्ताका नाइकेहरुले प्रयोग गरेका महिलाको संख्या धेरै छ । महिला कसैको खेत होइनन्, जसले ...
प्याड नदिने विद्यालयमा भर्ना नहुने
गोविन्द खड्का ‘विद्यालयमा प्याड व्यवस्थापनको अबस्था निकै कमजोर छ’ जिल्ला जनश्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख घनश्याम पोख्रेलले भन्नुभयो, ‘घरमै त कति समस्या छ ।’ उहाका अनुसार उचित व्यवस्था र व्यवस्थापन गरेका विद्यालयहरु थोरै मात्र होलान् । अधिकांशको अबस्था नाजुक छ । सिक्ने र सिकाउने थलो भएकाले प्रगति खोज्न विद्यालय पुग्नुपरेको हो । घरको अबस्था झन् कहि नसक्नु छ । धेरै महिलाहरु ...
दाङ सिमेन्ट उद्योगको हब
के.बि.मसाल सिमेन्ट उद्योगको सुरुवात आजभन्दा १९३ बर्ष अर्थात सन् १८२४ मा भएको हो । यसको आविस्कार जोसेफ एस्पडिन हुन । सुरुमा इंग्लेण्डको पोर्टलैंडको नामबाट सिमेन्ट उत्पादन भएको थियो । यो भन्दा पहिले संसारभर सिमेन्ट प्रयोग हुने ठाउमा चुनको धुलोमा वालुवा र मासको मसौटो मिश्रण गरी ढुङगा अथवा ईटालाई जोडान गरिन्थो । यसरी बनाएको लेपलाई बज्र भन्ने गरिन्थो । राणाहरुले दरवार ...
के कारणले खर्च हुँदैन विकास बजेट ?
हामी मुलुकलाई विकसित गर्न चाहन्छौं र हाम्रो देश विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा रहेको छ । संविधान कार्यान्वयनपछि समृद्धिको बाटो हामीले रोजेका छौं र तीव्र आर्थिक विकास हामीले खोजिरहेका छौं । राजनीतिक भाषणभन्दा विकास आयोजनामा जनताले बढी ध्यान दिने गरेका छन् । तर विडम्बनाको कुरा– देशमा विकास बजेट खर्च हुन नसकी बर्षेनी फ्रीज हुने गरेको छ । यो महिनासम्मको विकास अवस्थालाई हेर्दा ...
डा. शेरबहादुर पुन होलीमा रमाइलो गरेर रंग, अबिर खेल्दा यसबाट स्वास्थमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव बारेमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । यसबाट खासगरी छाला तथा आँखामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेपनि शरीरका अरु अंगहरुमा पनि उत्तिकै नकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्छ । खासगरी रंग बनाउँदा प्रयोग हुने विभिन्न रसायनले गर्दा स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउँछ । छाला रंगको प्रत्यक्ष असर छालालाई पर्ने गर्छ । ...